Ammaanada Ilaalinta Hantida ee Nevada, Qareenka iyo Qiimaha
Waa maxay Ammaanada Ilaalinta Hantida ee Nevada?
Ammaanada ilaalinta hantida ee Nevada ayaa ah isku-xirnaan lacag-maalmeed ah. Taas macnaheedu waa inaad dejin kartid aaminaad sidoo kale waxaad ka faa'iideysan kartaa hantida. Waxaa intaa dheer, waad sameyn kartaa labadaba waxaadna ku raaxeyn kartaa ka badbaadin deyn bixiyeyaasha mustaqbalka ama dacwadaha. Mar alla markii aad hantida u wareejiso Hay'adda Ilaalinta ee Nevada, laba sano ka dib, kalsoonida ayaa hantidaada ka ilaalinaysa deyn bixiyaha. Haddaad ku daabacdo wareejinta hantida hantida aaminka, wargeys Nevada ah, tusaale ahaan, waxay yareysaa wakhtigaas illaa lix bilood. Markaa, ka dib markay dhammaato qaanuunka xaddidan, kalsoonidu waxay qufuldaa hantidaada gudaha. Markaa, deyn bixiyeyaashaadu ma gaari karaan si ay xukunka uga qancaan.
Waxaa jira xadadyo aad u yar oo loogu talagalay macaamiisha aaminka ah; ilaa iyo intaadan aasaasin kalsoonida lagu khayaanaynaayo kuwa amaahda ku leh oo aad la kulanto qaababka hawlgalka ee fudud, sharciga ilaalinta Nevada wuxuu ku siin karaa faa'iidooyinka ilaalinta hantida. Ugu yaraan hal wakiil ayaa ah inuu ahaado degane Nevada kaasoo mas'uul ka ah inuu hayo diiwaanada kalsoonida, xereynta shuruudaha canshuurta. Qof ka mid ah Nevada wuxuu u baahan yahay inuu ugu horreyn maamulo aaminaadda. Qof ku sugan gobolka Nevada wuxuu u baahan yahay inuu noqdo maamulaha koowaad ee aaminaada.
Shirkadaha iyo LLC-yada
Adeegyada Sirta ah
Samaynta Koontada Bangiga
Barnaamijyada Aruurinta Shaqada
Waxaan bixinaa kuwa ugu Nevada
adeegyada iyo waliba lacag la’aan
Ilaalinta dhaqaalaha iyo xakamaynta la taaban karo
Deggeneyaasha aaminaada (adigaba) waxaad ku leedahay awood la taaban karo (awood) waxqabadka aaminka, gaar ahaan sida wakiilka u sameeyo u qeybinta ka faa'iideystayaasha aaminka. Si toos ah uma dalban kartid wakiilka inuu si joogto ah lacag u siiyo mulkiilaha aaminka. Haddii aad awoodid, garsoorka wuxuu kugu qasbi karaa inaad u isticmaasho awoodaas si aad ugu toosiso lacagaha cadawgaaga sharciga ah. Waad dalban kartaa, si kastaba ha noqotee, waxaad codsan kartaa in la qaybiyo. Intaas waxaa sii dheer waxaad awood u leedahay diidmada qayaxan ee qaybinta ka-faa'iideystayaasha kale ee aaminka ah. Tani waxay u oggolaaneysaa degane aamin ah inuu ku sii nagaado kursiga darawalka inta lagu guda jiro qeybinta hantida. Waxaad leedahay awood dherer hub ah si aad saameyn ugu yeelatid waqtiga iyo xaddiga u qeybinta naftaada.
Muuqaal kale oo nabadeed oo lagu dhisay sharciyadan ayaa ah awooda kalsoonida lagu aaminay inuu u adeego "wakiilka maalgashiga." Muuqaal kale ayaa ah awooda meesha looga saarayo laguna badalayo wakiilkaaga Nevada. Ugu dambeyntiina, waxaad dejin kartaan sida kalsoonida ay hantida u kala qaybiso marka degganehu dhaafo waxa aan ugu yeedho "awoodda ballanta".
Aagga ilaalinta kalsoonida hantida ayaa ah wax ku cusub Mareykanka isla markaana dhowr gobol oo keliya ayaa hirgaliyay sharciga aaminaada hantida. Khubaradu waxay muddo dheer u yaqaaneen Nevada inuu yahay garsoor ganacsi ku habboon oo leh shirkado habboon iyo shuruucda LLC. Maxkamadaha cadeeyay inay taageeraan xiisada shirkadeed. Hadda, Nevada wuxuu ka baxay horu marka uu yahay awoodda gudaha ee doorashada ee xallinta kalsoonida ilaalinta hantida. Waxay noqon doontaa sannado kahor inta aan kiiska la horumarin. Si kastaba ha noqotee sharciyada Nevada waxay ku cad yihiin badbaadada ay siinayaan dhisme aamin ah oo ilaalin hanti leh.
Waxaa la sheegay in Nevada ay bixiso qaabdhismeedka sharciga ugu wanaagsan ee abuurista iyo joogtaynta aaminka hantida hantida. 2010 ilaalinta hantida maguurtada ah ee '13 Nevada' waxay heshay qiimeyn A + oo ay sameysay majaladda Forbes, oo ah tan ugu wanaagsan umadda iyo gobolka kaliya ee lagu dhaliyo A + ka baxsan XNUMX.
Majiro canshuurta dakhliga dowlada
Canshuur shirkadeed ma laha
Xeerarka ugu gaaban ee xadidaadda wareejinta hantida (sannadaha 2), oo noqon kara mid gaaban sida bilaha 6 haddii si sax ah loo meel mariyo
Dhammaan deyn bixiyeyaasha waxaa laga horjoogsaday helitaanka hantida kalsoonida, oo ay kujiraan lacagta masruufka, masruufka carruurta, go'aannada, iwm.
Heerka caddayn ee ugu sarreeya; deyn bixiye kasta oo ku loolamaya wareejinta hantida waa inuu bixiyaa caddeyn cad oo qancisa ujeeddada khiyaanada
Ilaalinta Hantida Gudaha
Fadlan maskaxda ku hay, aaminaada ilaalinta hantida ee Nevada ayaa ugu horreyn loogu talagalay dadka deggan Nevada oo leh hantida Nevada. Sharciga kiiska uma muuqdo mid si wanaagsan u deggan haddii degganehu ku nool yahay gobol kale. Waxaan aragnay garsoorayaasha oo dhahaya, dan kama lihi haddii Nevada leeyahay qaynuunadan. Halkan kuma haysanno California, New York, iwm. Markaa waxaan amar ku siinayaa wakiilka inuu wareejiyo hantida.
Marka, waa maxay xalka loogu talagalay dadka aan degganeyn Nevada? Hagaag, ururkeenu sidoo kale wuxuu leeyahay kali kali qaran ee “Trigger Trust.” Taasi waa aaminaadaasi waa aaminaad ilaalin hanti ku saleysan oo Mareykanku leeyahay ilaa uu qarka u saran yahay sharciga. Markaa wakiiladu waxay go'aansadaan inay kiciyaan qodobka ka baxsiga oo ay aaminaada u beddelaan aaladda ilaalinta hantida ugu xoogan… .a Cook Islands trust. Hay'addeenna shati-gelinta leh, dammaanad u leh, sharciga sharciga Jasiiradda Cook Islands ayaa ka badan tallaabooyinka sida wakiilka loo yahay. Wakiilka Nevada wuxuu u baahnaan lahaa inuu ka dhuunto amarada maxkamadda Mareykanka. Wakiilka ajanabiga ah, dhanka kale, looma baahna inay raacaan amarada maxkamada shisheeye, wayna diidi karaan inay ku wareejiyaan hantida aaminka ah cadawgaaga sharciga ah.
Qareenada iyo shirkadaha aaminka waxay dhisaan aaminaada Nevada. Waxaad wici kartaa lambarada kore mid ka mid ah waxaadna weydiin kartaa su'aalaha lataliyayaashayaga khibradda leh ee kaa caawin doona hagidda iyo ka jawaabista su'aalahaaga. Bedel ahaan, waxaad buuxin kartaa mid ka mid ah foomamka wadatashiga bilaashka ah. Qareenadaada midkood ayaa diyaarin kara aaminaad u baahan baahiyahaaga.
U Bixinta Qorshahaaga Ilaalinta Hantida
Haddii aad horay u leedahay qorshe ilaalin hanti, meel aamin ah, ama aad ka sii fiican tahay, aaminaha kiciya, wuxuu bixiyaa kala duwanaanshaha istiraatiijiyaddaada. Shirkadaha sharciga ugu sarreeya ee ilaalinta hantida ee adduunka ayaa kugula taliyaya inaad ku faafto ilaalinta hantidaada hareeraha gawaadhi dhowr ah oo ilaaliya hantida iyo awoodo badan oo ilaalinta hantida. Tani waxay ka dhigeysaa qofka kaa soo horjeedaa ee sharciga ah inuu la dagaallamo dhinacyo badan, isagoo ku darsaday kharash aad u badan kharashaadka sharciga ah ee lagu raadinayo hantidaada. Kalsoonida Nevada ama kicinta aaminaada ayaa amaan kara qorshe kasta oo lagu ilaaliyo hantida, dibedda ama gudaha.
Kala hadal khabiirka adeegga ganacsiga ee Nevada maanta, la-tashi bilaash ah inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah, wac 1-888-444-4412